John Carmack: Linux maahan suuq lagu noolaan karo ciyaaraha. | Laga soo bilaabo Linux
John Carmack: Linux maahan suuq lagu noolaan karo ciyaaraha.
nano | | GNU / Linux, Ciyaaraha, Noticias
Yup, iyagu khalad ma akhrinayaan; caan ku ah John Carmack ayaa yiri (waqti fog kahor, ku dhowaad laba bilood) in suuqa ciyaaraha uusan ka socon karin Linux.
Dhamaanteen sifiican ayaan u ognahay taas barnaamijka id Shaki la'aan waa hormuudka ciyaaraha Linux iyo, weliba, halyeey u ah abuurista cayaaraha sida Quake (dhammaan noocyadeeda) iyo Qiyaamaha, iyo sidoo kale sii deynta matoorradooda.
Carmac ayaa sidaas yidhi muddo dheer barnaamijka id Waxay isku xilqaantay inay bixiso taageerada Linux laakiin in waqtigan oo dhan qaybtan shirkaddu aysan matalin lacag badan oo soo gasho oo runtii waxa kaliya ee ay heshay ay ahayd, shaki la'aan, sumcad wanaagsan oo Linux ah bulshada (Waa run).
Hadda, Carmac Waad ku saxantahay inaad dhahdo Linux kumuu matalin adiga software-ka id talooyin fiican oo lacag ah taasna ma aysan laheyn daadad badan oo soo degsasho ah, laakiin sidoo kale waa inaan tixgelinno dhinacyo iyo waxyaabo uu Mr. Carmack leeyahay:
Ugu horreyntii, waa in la ogaadaa in dhammaan rakibayaasha cayaaraha ee lahaa nooc asal ah oo Linux ah qoraal ku saleysan, ma ahan qaab raaxo leh adeegsade horumarsan ama laylis, runta soo socota. Adoo haysta rakibayaashaan Linux ka dibna u fidinaya rakibayaal iskood u shaqeynaya oo Windows ah, maxaad u xagli weyday dhinaca kale John? Weligaa fursad ugama helin fursad aad ku iibiso wax ay adag tahay in la cuno.
Maxaa intaa ka badan, shaqaale hore oo id in uu blog waqti dheer ka hor waxa uu u hibeeyay dhowr eray oo ku saabsan Raage (ciyaar aan waligeed ka dhigin Linux)
Waa lay xukumi doonaa haddii aanan helin waqti aan ku dhammaystirno dhismaha Linux
La tarjumay waxay noqon laheyd wax sida:
Nacas iga qabo haddii aynaan garan karin sida loo helo dhisme Linux ah.
Carmack laftiisu wuxuu sheegay inaysan xitaa isku dayin ...
Waayahay, waa qumman yahay, waxaan horeyba u haysannay mid ka mid ah sababaha id ma shaqeynin meheradda laakiin… ma jiraan wax kale?
Haa! Xaqiiqdii haa. Aqoonsiga Aqoonsiga maahan shirkad saameyn noocaas ah maanta ku leh suuqa y marna sameeyey xayeysiin ama ololeyaal fayras si loo dhiso xoog leh tusaale ahaan Valve ama Humble Bundle.
Intooda badan kuwa iibsada xirmooyinka waa kuwa isticmaala Linux runtiina, kuwa ugu badan ee bixiya waa isticmaaleyaasha Linux, Valve wuxuu hubiyay inuu bulshada si buuxda uga warqabo arinta, si aad iyo aad u sax ah markii ay rasmi noqotay Steam loogu talagalay Linux Phoronix dhacay iyo Michael Larabell's twitter waxaa lagu soo guuriyey su'aalo iyo xiise leh ... war kasta oo Madax wuxuu bixiyaa Steam loogu talagalay Linux waa la tixgeliyaa waxaana lagu dhawaaqayaa saacado gudahood shabakadda oo dhan iyo luqado badan iyo marinno muhiim ah, xitaa kuwa aan shaqo ku lahayn Linux ...
Tani waxay igu hogaamineysaa inaan dhaho markaa, Linux maahan suuq wax ku ool ah oo loogu talagalay cayaaraha? o Linux maahan suuq wax ku ool u ah barnaamijyada id? Waxyaabaha sida ay yihiin.
source: Ku shaqeynaya Linux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » John Carmack: Linux maahan suuq lagu noolaan karo ciyaaraha.
Waxaan aaminsanahay in Linux ay tahay suuq yar oo lala wadaago daaqadaha. In kasta oo ay u badan tahay boqolkiiba ka badan kuwa Linux-ku inay ciyaaraan ciyaaro ka badan daaqadaha, haddana farqiga ayaa weli aad uga weyn tirada guud. Xalku waa in la kordhiyo tirada dadka isticmaala Linux, taasna waxaa caawin kara cayaaraha, laakiin waa inay la socotaa horumarin kale. Khibradeyda shaqsiyadeed, dhibaatada ugu weyn ee aan la kulmay waa iswaafajinta liidata ee M Office. Xitaa sidaas oo ay tahay, dadaallada sida uumiga loogu talagalay linux, iyo sidoo kale isticmaalka Linux ee maamullada iyo iskuulada dowladda ayaa wax badan ka caawiya sidii loo gaari lahaa ujeeddadan.
Haddii aad sax tahay, in kasta oo iswaafajinta MS Office aysan ahayn wax lagu eedeyn karo kuwa horumariya ee LibreOffice maxaa yeelay waa inay isku dayaan inay la qabsadaan qaab aan caadi ahayn oo xirmay sidoo kalena aan lahayn ujeedo ah inay shaqeyso.
Waan ku raacsanahay. Eedda M Office ee aan raacin heerarka. Tani waa tan ugu xun ee alaabada lahaanshaha aragtidayda. Laakiin maan tilmaamayn dambiilaha, laakiin sababaha ay u adag tahay in dadka lagu qanciyo inay tahriibaan.
Ku jawaab seachello
Haddii aan dhammaanteen khiyaanaynay Microsoft, adduunka kombuyuutarka ayaa ka fiicnaan lahaa.
Imaatinka Steam ee GNU / Linux waxaan arki doonaa haddii ay runti tahay suuq faa'iido leh ama aan ahayn ciyaaraha fiidiyowga.
Qofna kuma doodi karo in Carmack yahay qof caqli badan oo FPS DAD ah. Laakiin maanta way fududaatay oo RAGE-keedii ugu dambeeyay ee la sii daayay waxaa ka buuxay dhibaatooyin. Markay STEAM soo baxdo waa la arki doonaa haddii Linux u qalanto boos ka mid ah suuqa ciyaarta, taas oo marka la eego, aan ka tirsanayn PC ee ay tahay Consoles iyo Telefoonnada Gacanta.
Hagaag, tan waa in lagu sameeyaa, hal dhinac ama mid kale, oo leh qoraalka kale ee maanta:
Barmaamijka 'Gnu / Linux' wuxuu noqon doonaa mid faa iido leh marka ay jiraan noocyo badan iyo goorta ay disrosku aad u fududahay in la isticmaalo kuwa aan ku jirin xisaabinta.
Amnesia iyo Penumbra waa cayaaro nooca "Badbaadada Badbaadada" ah oo loo daabacay Windows, iyo sidoo kale Mac, iyo sidoo kale Linux
Tani waxay caddeyn u tahay in wax walba ay ku tiirsan yihiin horumariyeyaasha ...
Maxaa ku dhacaya IDSoftware waa inaysan mar dambe la mid ahayn tan iyo markii ay joojisay inay ahaato daraasad madax-bannaan inay ka tirsan tahay Zenimax
Wax la mid ah DICE ayaa dhacay markii ay heshay shirkadda EA.
Haddii Nolosha-xiga ee soo socota ay u gaar tahay Steam-ka Ubuntu, waxaa jira in Gaming-ka Linux uu noqonayo mid aan la joojin karin ...
Ku soo jawaab Digital_CHE
Daa’uud DR dijo
Waxaan dhawaan ku hubin doonnaa wax soo saarka Steam ee Linux
Jawab David DR
Mudane Carmack waxaan qabaa inuu qaldan yahay. Cayaaro badan oo qaabka Aqoonsiga Aqoonsiga ah ayaa aad u fiican oo qabow, in aysan lahayn karti iyo awood ay dakhli uga soo saaraan barnaamijkan waa arrin kale. Sidoo kale waa in la ogaadaa in Software-ka Aqoonsiga (ID Software) uu mar hore ahaa mid ka mid ah tiirarka waaweyn ee tiirarka u leh soo nooleynta ciyaaraha fiidiyowga laakiin maanta runta ku dhowaad lama rinjiyeynin, halkii loo arki lahaa halyeeyo halkii ay ka ahaan lahaayeen ciyaartoy miisaanka ku dhex leh warshadaha.
»Qaab aan raaxo u lahayn adeegsade horumarsan ama laylis, runta soo socota.»
Kuu sheekee n00b, qunsuliyada ayaa ah waxa ugu raaxada badan ee jira waxaana 99% dadka aan aqaano (oo ay kujiraan dhamaan asxaabteyda) kuwaa oo wax ka ogaanaya GNU / Linux ay u adeegsadaan qunsulka wax walba.
Waxay si sax ah loola jeedaa xaqiiqda ah inay tahay qaab raaxo leh oo noob ah. Saaxiibadayda adeegsada Linux waxay doorbidaan inayan taabanin terminalka, maxaa yeelay iyagu waa isticmaaleyaal keliya, maahan saynisyahanno kombiyuutar ama xiiseynaya gudaha iyo dibedda nidaamka.
ka dib marka ay isticmaalaan daaqadaha uma tagayaan gudiga koontaroolka, maareeyaha qalabka, iwm iwm, taasi waa, gudaha iyo banaanka nidaamka
MAYA, way ka raaxo badan tahay in dulsaarka jiirka dul saar astaan, guji wax walbana way shaqeeyaan ...
Inta badan isticmaaleyaasha kombuyuutarku maahan kumbuyuutarrada kumbuyuutarka. Kaliya waxay u isticmaalaan inay yihiin aalad shaqo iyo / ama madadaalo ... Inta badan, PC-gu waa qalab, sida TV ama blender, kaliya wuu ka dhib badan yahay.
Waan ku raacsanahay xykyz, waxaan u adeegsadaa terminal-ka inaan kumbuyuutarkayga ku wareego waxaanan u arkaa inay ka dhakhso badan tahay oo aan ka dhib badnayn. Laakiin hal shay ayaa ii muuqda, dadka aan u baran waxay ka baqayaan terminal-ka. Taasi waa xaqiiqo, inkasta oo ay suurtagal tahay in la isku dayo in la saxo, lana dhiirrigeliyo isticmaalkiisa, iyo gaar ahaan dugsiyada.
Qayb ahaan wuu saxan yahay, tirada isticmaaleyaasha GNU / Linux OS maahan lacag badan oo la soo galiyo, iyadoo aan la xusin in aysan jirin dad badan oo guryaha ku isticmaala nidaamyadan hawlgalka.
Laakiin isla mar ahaantaana, isagu isagu wuu cambaareeyay wax soo saarka shirkadiisa isaga oo ka dhigaya rakibayayaashiisa ku saleysan qoraalka, taas oo aan tixgelinaynin shirkadda, waa inay noqotaa raaxo siman marka la rakibo sidoo kale kuwa isticmaala Linux.
Ku jawaab blaxus
Arrinta ayaa ah in falsafadda software-ka bilaashka ahi aysan ku habboonayn warshadaha ciyaarta fiidiyowga ee ku kobcaya barnaamijyo gaboobay oo beddelaya qalabka 3-dii sanoba mar ama xitaa ka yar, barnaamijka bilaashka ah wuxuu u socdaa dhinaca kale.
Ku jawaab sancochito
Waan diidanahay In kasta oo ay run tahay inay ku faanto barnaamij duugoobay, taas macnaheedu maahan in Linux ay suuq xun u tahay suuqyada noocan ah.
Runtu waa mid aad u adag oo waxaan qiyaasayaa wax badan
Kani waa maseyraa maxaa yeelay uumiga ayaa gamerkii ka qaaday Linux XD (JOKE)
Ku jawaab Pollito
Claaaaaaro, ninka nacas ma aha, in kasta oo uu u eg yahay; waxaa fiican inaad ku sharraxdo faras guuleysta (Windows) halkaasoo wax walba lagu sameeyo.